दायाँ खोजशब्द निर्धारण उपकरणको साथ अमेजनमा मेरो बेच्ने फन्ट कसरी गर्ने?
भन्नु पर्दैन कि इन्टरनेटमा खुला पहुँचमा उपलब्ध विभिन्न इ-कमर्स अनुकूलन र विश्लेषण औजारको विशाल विविधता छ। यही कारणले प्रायजसो अमेजनका लागि सफ्टवेयरको सही प्रकार छान्ने छनौट गर्नुहोस्, कुञ्जी शब्द निर्धारण उपकरणको अलावा, एक साँच्चै सचेत कार्य हुन्छ। यद्यपि, त्यहाँ केही प्रयुक्त सफ्टवेयर उपकरणहरू छन् जुन त्यहाँ त्यहाँ प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न सक्दछ। तल तपाई अमेजनमा बेच्ने मेरो सुरुवात विकल्पहरु को एक जोडी को लागी जाँदै हुनुहुन्छ कि कीवर्ड रैंकिंग उपकरण संग आफ्नो आवश्यकताहरु र उद्देश्य सबै भन्दा राम्रो तरीका सम्भव छ।
पहिलो निःशुल्क अमेजन खोजशब्द रैंकिंग उपकरण जो मैले उल्लेख गर्न चाहन्छु वैज्ञानिक विक्रेता, सम्भवतः अन्य ज्ञात प्रकारका बीचमा सबैभन्दा अनोखी एक सफ्टवेयर उपकरणहरु को मुख्य रूप देखि खोजशब्द अनुसन्धान संग निपटने। के तपाईं घडीको प्रतीक्षाको साथ सुझाव दिईएको सुझाव प्राप्त गर्नको लागि अन्तमा तपाईंको स्क्रिनमा देखाइएको छ? यो हुन सक्छ, वैज्ञानिक विक्रेता तपाईंको अन्तिम समाधान हुन सक्छ, किनकि यो अमेजन खोजशब्द निर्धारण उपकरणले तुरुन्त वास्तविक-समयका सुझावहरू दिइरहेको छ - यसले तपाइँलाई जानकारी र अतिरिक्त सिफारिस प्रदान गर्दछ जब सम्म तपाईं रोक्न र रोक्नुहोस् "रोक्नुहोस् " टांक।
यो एकदम सरल काम गर्दछ - केवल एक वा दुई मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरू खोज पट्टीमा भरेर सुरु गर्नुहोस्। अर्को, अमेजनमा तपाई कुन बजारमा उत्पन्न हुनुहुन्छ भन्ने चाहानुहुन्छ कि तपाईका लागि खोजशब्द डेटा उत्पन्न गर्न चाहानुहुन्छ। र तपाईं पैसा बिना उनको पूर्ण-मोटा संस्करणबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ - मेरो मतलब भनेको कि किवर्ड सुझाव परीक्षण परीक्षण संस्करणको साथ र कुनै सीमा बिना। र तपाईं कुनै पनि समयमा चाहानुहुन्छ जुन तपाईंको नवीनतम खोजहरूको सूची सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, यसलाई फिर्ता गर्न वा पछि यसलाई परिमार्जन गर्न। तपाईले CSV फाइलमा आयात गर्नुभएको अनुसन्धान डेटा प्राप्त गर्न आवश्यक छ वैज्ञानिक बिक्रेतासँग नयाँ नि: शुल्क खाताको लागि साइन-अप प्रक्रिया पास गर्न। तथापि, तथापि, यसको खुला-पहुँच संस्करणको एक मात्र सीमा दैनिक उपलब्ध छ केवल पाँच खोजीहरू। त्यो पहिलो नजरमा अपर्याप्त लाग्न सक्छ। तर विचार गरौं कि तपाईको प्रति PPC अभियानहरूलाई अनुकूलन गर्न प्रति हप्ता 35 प्रयासहरू, सूचीबद्ध परिवर्तनहरू, र त्यसमा पनि - यस अमेजन खोजशब्द निर्धारण उपकरणको फाइदाहरू निश्चित रूपमा खराब खराब प्रावधानलाई बढाउने।
सोनार एक साँच्चै दूर पहुँच र कुशल खोजशब्द अनुसन्धान उपकरण हो, जो 70 मिलियन भन्दा बढी खोजशब्दों को एक विशाल डाटाबेस को कवर गर्दछ। मेरो लागि, मैले यो सफ्टवेयरको सबै भन्दा शक्तिशाली पक्षहरू पाईँ जब मैले मेरो मुख्य लक्ष्य खोजशब्दहरूको लागि जैविक रेटिङ सुधार गर्न काम गरिरहेको थिएँ, साथै मेरो हालको पीपीसी विज्ञापन अभियानहरूको अनुकूलनका लागि। सामान्य रूपमा लिन्छ, सोनारले तपाईंलाई चारवटा विभिन्न प्रकारका खोजशब्द खोजीहरूसँग विश्वभर सबै पाँच प्राथमिक बजारमार्फत उपलब्ध गराउन मद्दत गर्दछ।
र यो अमेजन खोजशब्द मूल्याङ्कन उपकरण प्रयोग गर्न सबै सजिलो छैन। पहिलो आधारभूत खोज विकल्प डिजाइनर संयोजन गर्न डिजाइन गरिएको छ जुन सबैभन्दा सान्दर्भिक खोजी सर्तहरूको सुझाव सूचीसँग प्रत्यक्ष बिक्रेताहरूको बीचमा लोकप्रिय छ। यस तरिका, तपाईले चाहानु भएको कुनैपनि कुञ्जीको लागि तपाईले सँधै उच्चतम अनुमानित खोज भोल्युम देख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो विकल्प खोज उन्नत छ, जसले तपाईंलाई सबै भन्दा उपयुक्त उपयुक्त समकक्षहरू र LSI कीवर्डहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ - अन्ततः, सम्भावित कितावहरूको सूची बढाउन। र सोनारसँग उपलब्ध अन्तिम चरण तपाईंको गम्भीर महत्त्वपूर्ण खोजहरूमा भर्खरै गहिरो अनुसन्धान चलाउन भरिएको छ। यसो गर्नु, तपाईले चाहानु भएको जस्तो सान्दर्भिक संयोजनहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ, थप खोज यातायात अनुमानहरू साथ आउँदछ जुन समयको साथमा उचित अनुमान गर्न सकिन्छ।